“घरेलु हिंसाविरुद्ध बोलेकी हुँ”- विश्व - कान्तिपुर समाचार
“घरेलु हिंसाविरुद्ध बोलेकी हुँ”
काठमाडौँ — आफूमाथि घरेलु हिंसा भएको भन्दै अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले गत साता पति छविराज ओझाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी हालिन् । प्रहरीसामु ओझाले माफी मागेपछि शिल्पाले उजुरी फिर्ता लिए पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा निवेदन दिइसकेकी छन् ।
‘मंगलम् फिल्मको बेला पनि त्यस्तै भयो । भन्न पनि नखोज्ने अनि बिहे दर्ता गर्न पनि नमान्ने । बहाना निकालिरहनुहुन्थ्यो,’ शिल्पाले भनिन्, ‘कहिले मेरो जेठी श्रीमतीसँग नै डिभोर्स भएको छैन भन्ने कहिले बसाइँसराइको कागज बनाएको छैन भन्दै टार्ने । मैले त बुबाआमा छोडेर आइसकें, एउटा केटा मान्छेलाई बिहेको कुरा किन लुकाउनुपर्छ ? जहिले हाम्रो लभ पर्दै छ मात्रै भन्नुहुन्थ्यो । मलाई पनि त्यसै भन्न लगाएपछि त झगडै गरें । झूट बोल्ने भए म अन्तरवार्ता नै दिन्नँ भनेर अड्डी पनि कसें । त्यसपछि उहाँले मलाई हेपिस् भन्न थाल्नुभयो ।’
बिहे गरेको तीन वर्ष हुँदा पनि समस्या बल्झिरह्यो । शिल्पाका अनुसार, बाहिर हुँदा कहाँ गएँ, के गरें, के खाएँ ? एकएक बेलीबिस्तार लगाउनुपर्थ्यो छविलाई । यति हुँदाहुँदै पनि शंका गर्ने र परपुरुषसँग नाम जोडेर जथाभावी बोल्न थालेपछि शिल्पाको चित्त दुख्दै गयो । ‘मैले काम गरेको फिल्मका कुनचाहिँ पुरुषसँग उहाँले शंका गर्नुभएन होला ?’ उनले भनिन्, ‘अरूले सुनाइदिएका कुरामा नै उहाँ बढी उचालिनुहुन्थ्यो ।’
यति बेला दाइ बनाएकी विकास रौनियारको घरमा संरक्षण लिइरहेकी शिल्पाले अब फर्केर नजाने अडान लिएकी छन् । ‘बिहे गरेर ल्याइसकेपछि पनि किन बिहे दर्ता गर्न मान्नुभएन त उहाँले ?’ उनले भनिन्, ‘मसँग केही स्वार्थ रहेछ कि ?’
तीन वर्षदेखि आफूले घरेलु हिंसा सहँदै बस्नु गल्ती भएको स्विकार्छिन् शिल्पा । ‘कानुन त रहेछ नि । गल्ती गर्नेले सजाय पाउँदो रहेछ’ यसैलाई घरेलु हिंसा भनिँदो रहेछ भन्ने आफूले बल्ल बुझेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘यस्तो पीडा भोग्ने गाउँमा झन् कति होलान् ? मैले घरेलु हिंसाविरुद्ध बोलेकी हुँ । नत्र छविजीले माफी मागिसक्नुभएको छ, डिभोर्स केस फाइल भइसकेको छ, अलगअलग भइहालिन्छ । चुप बस्दा हुने हो । तर चुप बस्नु हुँदैन ।’
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०८:०८
जरिवाना तिरे स्वदेश फिर्ता
मलेसिया — मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई माफीसहित स्वदेश फर्कन दिने भएको छ । गृहमन्त्री मुहिद्दिन यासिनले बिहीबार पुत्राजयास्थित अध्यागमन विभागमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी अगस्ट १ देखि डिसेम्बर अन्त्यसम्मको ५ महिने आममाफी कार्यक्रम घोषाणा गरे ।
‘ब्याक फर गुड (बीफोरजी)’ नाम दिइएको आममाफी कार्यक्रम अन्तर्गत गैरकानुनी कामदारले स्वदेश फर्कन ७ सय रिंगिट जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यासिनले उक्त कार्यक्रमको उपयोग गर्दै गैरकानुनी आप्रवासी अध्यागमन विभागका कार्यालयमा जरिवाना शुल्क तिरेर स्वदेश फर्कन सक्ने बताए ।
घर फर्कन चाहने गैरकानुनी कामदार सम्बन्धित देशका दूतावासबाट यात्रा अनुमतिपत्र लिएर अध्यागमन विभाग कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने छ । त्यसरी विभाग पुग्ने कामदारलाई अधिकारीले बायोमेट्रिकलगायत विवरण संकलन गर्ने तथा अध्यागमन सिस्टममा सूचीकृत गरी मलेसियाबाट बाहिरिने पास दिने छन् । पास पाउने कामदारले एक साताभित्र हवाई टिकट काटी स्वदेश उड्न सक्ने यासिनले बताए ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पश्चिमी मलेसियाका ८० अध्यागमन काउन्टर र २ सय कर्मचारी खटाइएको छ । कार्यक्रममार्फत स्वदेश फर्कने कामदारलाई अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राख्ने कारण उनीहरू पुनः मलेसिया प्रवेश गर्न भने पाउने छैनन् । तत्कालका लागि यो कार्यक्रम पश्चिमी मलेसियामा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
मलेसियामा रहेका करिब ४ लाख नेपालीमध्ये हजारौं गैरकानुनी अवस्थामा बसिरहेका अनुमान छ । त्यस्ता नेपाली यस्ता कार्यक्रमबाट देश फर्केको खण्डमा सजायबाट जोगिने छन् । करिब २० लाख विदेशी कामदार रहेको मलेसियामा ठूलो संख्यामा गैरकानुनी छन् । गृहमन्त्री यासिनले ब्याक फर गुड कार्यक्रमको म्याद सकिएपछि गैरकानुनी कामदारविरुद्ध देशव्यापी कारबाही चलाईने जनाए ।
यसअघि सरकारले सञ्चालन गरेको ‘थ्री प्लस वान भोलेन्टर्ली’ आममाफी कार्यक्रममा भने न्यूनतम ४ सय रिंगिट जरिवाना तोकिएको थियो । तर गैरकानुनी रूपमा मलेसियामा रहेको अवधिका आधारमा जरिवाना रकम तोकिएका कारण कतिपयले ३ हजार १ सय रिंगिटसम्म तिरेका थिए ।
मलेसियाको सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०१४ देखि गतवर्षको अगस्टसम्म सञ्चालन गरिएको उक्त आममाफी कार्यक्रममार्फत ८ लाख ४० हजार गैरकानुनी आप्रवासी कामदार स्वदेश फर्केका थिए ।
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०८:०५